About Us - Yangzhou Langxu Lighting teknolojia Co., Ltd.
Yangzhou Langxu Lighting Technology Co, Ltd dia hita ao amin'ny Guoji Town Industrial Park, fihetsiketsehana fihetsiketsehana fanamboarana jiro eny an-dalambe any Sina, Yangzhou, Faritanin'i Jiangsu. Amin'ny lafiny andrefan'ny làlan'i Beijing-Shanghai Expressway, miaraka amin'ny lakandranon'i Beijing-Hangzhou, tena tsara ny fifamoivoizana. Amin'ny maha-orinasa misondrotra azy, miaraka amin'ny tombony fampandrosoana indostrialy tena tsara dia mivoatra haingana izy io hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2012!
Fototry ny fandraharahana momba ny jiro Langxu dia: mirehitra jiro LED, jiro andrefana, jiro avo avo, jiro tokana, jiro avo roaana, jiro zaridaina, jiro zaridaina, jiro sy fifamoivoizana ary karazan-javaboary hafa, ary koa jiro manohana, tsipika famantarana. polona jiro eny an-dalambe Ary ny vokatra sy ny fikarohana momba ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra sy ny serivisy.
Raha resaka lafiny fanavaozana ara-teknolojia sy fampandrosoana ny vokatra dia tsy mitsahatra ny fitrandrahana Langxu ny teknolojia mpanamboatra sy ny teknolojia fanodinana ny indostrian'ny jiro eny an-trano sy any ivelany, dia manangana studio famolavolana sy fikarohana ho an'ny vokatra jiro vaovao eny an-dalambe, ary manao asa an-tanandehibe sy lalana. tetikasa jiro. Ny vokatra avy amin'ny hazavana Langxu dia nahavita tamim-pahombiazana ny fanamarinana momba ny fanamarinana kalitao, ny fanamarinana fipoahana fipoahana, ny fahazoan-dàlana famokarana fiarovana, ny fanamarinana ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana ary ny fanamarinana avo lenta.
Raha resaka resaka filozofia, i Langxu dia manana haitao teknolojia matanjaka, fitaovana feno, teknolojia mandroso, fitantanana kalitao hentitra, famolavolana mialoha sy tokana, fomba fitiliana tonga lafatra ary foto-kevitra fanamainty ivelany izay hiezaka hanana fizarana tsena sy eken'ny mpanjifa!
Raha resaka lafiny andraikiny ara-tsosialy, ny Langxu jiro dia mifikitra amin'ny foto-kevitra famolavolana maitso sy maoderina, ary miezaka ny hamoaka jiro LED mahomby sy angovo azo avy amin'ny masoandro mba hampiroborobo ny fananganana tontolo iainana vaovao sy hanangana seho mahafinaritra ho an'ny tanàna.
Langxu Lighting dia mpanamboatra jiro sy mpanome lalana mivoatra izay mila fotoana lehibe tsy an-kiato ary ankamamiany ny fotoana fampandrosoana rehetra omen'ny mpanjifany. Avelao ny mpanjifa hahatsapa ny maha-zava-dehibe ny orinasa tanora sy ny maha-zava-dehibe ny fandrosoana, ny vidiny mirary ary ny serivisy alohan'ny varotra sy ny serivisy alohan'ny fivarotana mba hahazoana fahafaham-po amin'ny mpanjifa!